Dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay go'aanka Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay go’aanka Kenya
Wuxuu afhayeenka sheegay in tallaabadan ay horseedayso in xiriirka labada wadan uu caadi kusoo laabto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucalimo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhaweysay go'aanka Kenya ay dib ugu furto duulimaadka Maanta oo Khamiis ah.
Qoraal kooan oo uu soo dhigat bartiisa Twitter ayuu ku shaaciyay afhayeenka in Kenya ay qaadey tallaabo haaginaysa xiririka labada dal oo meesha ugu hooseysay maraya, iyadoo Kenya lagu eedeeyay faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya.
Kenya ayaa markii ay xireysay hawada bashii hore waxay sheegtay in illaa saddex bilood, oo laga gaarayo August ay xirnaanayso, balse hadda kasoo hormarisay waqtigaasi, mana la oga sababta iyo ujeedka ay ka leedahay.
Xiriirka labada wadan ee Geeska Afrika ku yaalla, ayaa la filayaa inuu dib usoo laabtay, waxaana wararku ay sheegayaan in Rooble uu kusii jeedo Nairobi kadib markii uu casuumaad ka helay Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Kenya ayaa aad u daneynaysa inuu soo laabto cilaaqaadka maadaama beeralayda Qaadka ay waayeen suuq ay u iib geeyaan Maandooriyahan malaayiinka dollar bil walba ka sameynayay, waxaana joojintiisa ay timid kadib markii Covid-19 ka dilaacay Soomaaliya 2020, inkastoo markii dambe la siyaasadeeyay.